စီးနင်း Koowheel လျှပ်စစ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသှားဖို့စကိတ် - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
စီးနင်း Koowheel လျှပ်စစ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသှားဖို့စကိတ်
အသက်တာ၏ခေတ်မီအစာရှောင်ခြင်းများတွင်အဖြူကော်လာ၏အများဆုံးအဘို့, ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများတနင်္ဂနွေမှာအကောင်းတစ်ဦးအပျြောအပါးပါပဲ။ ဤတွင်မေးခွန်းတစ်ခုလာ: ဘယ်လိုသူတို့ကသဘောတူညီခဲ့ရာအရပျမှရနိုင်မလဲ? KOOWHEEL လျှပ်စစ်စကိတ်စီး သောသူတို့အားဖက်ရှင်ငယ်ရွယ်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသူတို့ပင်ဝေးလူစည်ကားမြေအောက်ကနေ, မြို့ဘတ်စ်ကားယူခြင်းအားဖြင့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကနေဆငျးရဲခံရရန်မလိုပါဆိုလိုသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားလူငယ်များကြောင်းကိုမုန်း။ သင်တစ်ဦးစကိတ်စီး Scooter ကိုရှေးခယျြခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏အံ့သြစရာတနင်္ဂနွေကိုခံစားခြင်းနှင့်သင်၌စိတ်ဝင်စားကြဘာလုပ်ပေးနိုင်သည်။ ထိုသို့သောတောင်တက်အဖြစ်ပင်စတော်ဘယ်ရီ Pick ကြက်တောင် Play ။ ပျြောရှငျတဲ့တနင်္ဂနွေခံစားပေမယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်သာ။ ဒါကြောင့်စီးနင် Koowheel လျှပ်စစ်စကိတ်စီး ထားတဲ့စံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်သင်ရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ် Koowheel E-စကိတ်စီး ?
ပထမဦးစွာကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ် တတ်နိုင် လျှပ်စစ်စကိတ်စီး တစ်ဦးကိုအလွယ်တကူအစားထိုးဘက်ထရီအတူ။ ဒါဟာသီးသန့် brushless နှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီး Dual-In-ဘီးအချက်အချာမော်တာ,ဘလူးတုသ်ကြိုးမဲ့ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု များနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့အကြမ်းခံကနေဒါမေပယ်7အလွှာ။ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း 40km / h သည်နှင့်သင်ဓါတ်ငွေ့ guzzling သို့မဟုတ်အပေါငျးတို့သလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်စက်ဘီးကနေချွေးမပါဘဲရှေးခယျြမြို့မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားကြဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုခံစား။ သင်ပင်အိတ်၌ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရန်သူကသယ်, ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုသို့မဟုတ်ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဦးတည်းပါစေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Koowheel လျှပ်စစ်စကိတ်စီး လူတိုင်းနည်းပညာဖန်တီးသောအဆင်ပြေစေရန်ပျော်မွေ့နိုင်ဖြစ်သင့်သောရိုးရှင်းသောအတွေးနှင့်အတူဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့လျှပ်စစ်စကိတ်စီးအနည်းငယ် geeks များအတွက်ရုံကစားစရာသည်ဟုမထင်ကြပါဘူး။ အနာဂတျမှာ, ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကအခြားရွေးချယ်စရာပုံစံဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ချွေတာမော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်စင်စစ်လူတန်းစားမယ့်ကာလတိုပေးရတဲ့အသစ်တစ်ခုရွေးချယ်မှုသည်, စူပါမားကက်များနှင့်ပတ်ပတ်လည်ရတဲ့နှင့်စျေးဝယ်သွားနည်း အဘယ်အရာကိုတမြို့လုံးပတ်ပတ်လည်လွတ်လပ်စွာခရီးသွားလာနိုင်ဖြစ်ခြင်းထက်ပိုအံ့သြစရာဖြစ်နိုင်မည်နည်း ဒါဟာပုံမှန်စကိတ်စီးထက်စီးဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ အဝေးထိန်းအသုံးပြုခြင်းသင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တက်မတ်တပ်ရပ်နှင့်စီးနင်းပျော်မွေ့သည်။